Zavatra Dimy Tsara Fantatrao Amin’ny Mariazy Turkmen · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Jolay 2014 22:00 GMT
Raha manana fahafahana manokana maka ny etona fandrehitra harem-pirenena ianao, dia afaka manarama an'i J-Lo, ary raha tsy manana izany aza ianao, dia tsy maintsy mahatsangana ny olona ny mpihira nalainao.
Nidera [tkm] an'i Kakysh i NitrogeN, ary nanontany mikasika ny Andriamanimbavy (muse) izay mipoitra matetika ao amin'ny hirany:
Liana te-ahafantatra [tkm] ihany koa i Meka MerGenius mikasika ilay lehilahy ambadik'ilay feo:
Nizara ny filozofiany mikasika ny fanambadiana kosa ireo mpiserasera sasany:
NitrogeN nanohy, namazivazy [tkm]:
Misolo toerana ny akanjo fotsy nentim-paharazana ny akanjo mavesatra rehefa mandihindihy avokoa ny zava-drehetra. Pikantsary tamin'ny lahatsary YouTube video nampakarin’i Andrey Kniaz.
Nanontany ny Radio Free Europe / Radio Liberty (RFE / RL) raha lamina ofisialy na fomba fanao tsy ofisialy izany fomba amam-panao nentim-paharazana izany. Nitanisa ireo fijoroana vavombelona ny sampan-draharaha izay manamafy fa anisan'ny lanonana ofisialin'ny mariazy rehetra ny sary. Na dia izany aza, toa tsy miteraka olana teo amin'ireo mpiserasera izany.
Alex naneho hevitra [ru] hoe:
Tsy maintsy manao veloma amin'ireo havany akaiky rehetra ny vehivavyhanambady. Sary nampakarin'i Zarina Max